सफल हुने इच्छा कसलाई हुँदैन र ? तपाईलाई पनि त सफल हुने इच्छा छ, होइन र ? केमा सफल हुने भन्नुहोला । तपाई जेमा सफल हुन चाहनुहुन्छ त्यसैमा । बिद्यार्थी, शिक्षक, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदुर, पत्रकार, लेखक, खेलाडी, गृहिणी, वकिल, डाक्टर, राजनितिज्ञ, नेता, नीजि व्यवसायी आदि आदि । मानिसले आपूmले चाहेको काममा सफल हुदै जानु भनेको जीवनमै सफल हुदै जानु हो । सफल हुनुको अर्थ हो खुसी हुनु र असफल हुनुको अर्थ हो दुःखी हुनु । यसलाई अभैm सारमा भन्ने हो भने सायद मानिस खुसी हुनुको अर्थ सफल हुनु हो र दुखी हुनुको अर्थ असफल । मानिसले जीवनममा खोजेको र चाहेको खुसी हो । केही मानिस जीवनमा धेरै थोक भएर पनि सफल हुन नसकेर निरास छन्, तनावमा छन्, दुखी छन् । तर केही मानिस धेरै धनसम्पति र पद नभएपनि खुसी र सन्तुष्ट जीवन बाँचिरहेका छन् । कोही आपूmसँग केही नभएको भनेर दुखी छन् र आपूmलाई असफल ठान्छन् । अझ धेरै मानिस त अरुको जति आपूmसँग नभएर दुखी छन् । के तपाई पनि असफल भएर निरास त हुनुहुन्न ? सायद दुनियाँमा कुनै यस्तो मानिस छैन जसलाई जीवनमा सधैं खुसी नै खुसी मिलोस र त्यस्तो पनि कोही छैन जसको जीवनमा दुखैदुखः मात्र सधै होस् । दुखः र सुख अर्थात सफल र असफल एउटै व्यक्तिका लागि फरक फरक समयमा आइरहन्छन्, गइरहन्छन् । त्यसैले न कोही सधै दुखीमात्र भइरहन्छन् न कोही सधै खुसी नै खुसी मात्रै भोगेर जीवन गुजार्छन् ।
सफल र असफल मानिसका जीवनमा आइरहन्छन् । कुनै मानिस सफलै सफल भइरहने र कुनै सधैं असफल मात्रै भईरहने भन्ने हुँदैन । तर हामी कतिपय मानिसका जीवनमा यस्तै भएको देख्न पुग्छौं । कोही सफलै सफल र कोही असफलै असफल । सफल हुनु भनेको खुसी हुनु हो भन्ने बुझेपछि खुसीलाई बढाउने, धेरैभन्दा धेरै समय खुसी हुने गर्नाले मानिसले सफल भएको अुनभुति गर्न सक्छ । दुखी हुनुलाई खासै मेहनत गर्नु पर्दैन । केही नगर्नुहोस् अभाव शुरु हुन्छ, केही नसिक्नुहोस ज्ञान कम हुन्छ, जोखिम नलिनुहोस कहिल्यै असफल हुइदैन त्यसैले सफल हुनुको खुसी पनि पाइदैन । यी सामान्य अर्थमा दुखःका कारण बन्ने गर्छन् ।
सफल हुन कर्म गर्नुपर्छ, कर्म अर्थात काम । काम नगरिकन सफल हुइदैन । तर, काम गर्ने सबै सधै सफल हुदैनन् । उनीहरुको जीवनमा पनि सफल र असफल आउदै जादै गर्छ । यस्ता मानिस अर्थात कर्म गर्ने मानिसले सफल हुदा खुसी हुन्छन्, खुसी बढदै जान्छ । खुसीसँगै उन्नति प्रगति हुदैजान्छ । अरुको नजरमा उदाहरणिय व्यक्ति बन्न पुग्छन् । असफल हुदा पनि धेरै नोक्सानि हुदैन । किनकि उनिहरुले सिक्छन् र पुन अगाडि बढछन् । त्यसैले सफल हुन चाहनेले सधै कर्म गर्नुपर्छ ।
सफल हुन चाहनेले कर्म गर्नुपर्छ भन्नेकुरासँग सहमत भएपछि कस्तो कर्म गर्ने भन्ने कुरा आउछ । तपाईको काम जब सफल हुन्छ तब तपाईमा खुसीको अनुभुति हुन्छ । अब तपाई हाम्रो ध्यान खुसीमा मात्रै होइन कति आयुको खुसी भन्ने हुन्छ । छोटो आयुको खुसी त जसरी पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ तर यस्तो नहोस कि खुसीको आयु छोटो मात्रै हुने होइन त्यो छोटो आयुको खुसीले लामो दुखःलाई निम्ता दिएको नहोस् । जस्तो पसलमा तपाईलाई एकदमै मनपर्ने खाना सजाएर राखेको थियो । आनन्द मानेर खानुभयो । खानुको खुृसी त प्राप्त भयो तर बदलामा तिर्ने पैसा गोजीमा रहेनछभने के होला ? त्यस्तै तपाईको जिब्रोलाई खुब मिठो लाग्ने तर तपाईको शरिरले नसहने चिज खानुभयो भने यस्तो खुसीको आयु कति होला ? हामीलाई पैसाको जरुरत थियो कसैलाई विश्वासमा पारेर पैसा हात पार्यौं वा समान अथवा सेवाको जरुरी थियो त्यो प्राप्त गर्यौं तर बदलामा समयमा तिर्ने पैसा भएनभने खुसीको आयु कति होला ? हामी जुन समयमा जुन कामका लागि छौं त्यो बेला त्यो काम ठिकठाकसँग नगरेर अथवा कम मेहनत गरेर, ठीक त्यही समयमा आफुलाई मनपर्ने मनोरञ्जन गरेर पनि खुसी हुन सक्छौं । जस्तै विद्यार्थिले स्कुलमा कठिन होमवर्क बुझाउनु पर्ने दिन सिनेमा हेरेर वा साथिसँग रमाईलो गरेर । व्यक्तिले काम गर्नु पर्ने समयमा काम नगरेर बहानावाजी बनाएर पनि खुसी मनाउन सक्छौं । तर यस्तो खुसीले दुखःलाई निम्ता दिइरहेको हुन्छ । दुखःलाई निम्ता दिने कर्म गर्ने र एकछिन खुसी हुने कर्मले मानिसलाई सफल हुने बाटोमा हिँडाउदैन ।
हार्ने वा असफल हुने डरले कर्मै नगर्ने मानिसले सफल हुनुको आनन्द कहिल्यै पाउँदैनन् । त्यति मात्रै होइन उनीहरुले त सफल हुने प्रगतिको यात्रा नै गरेनन् । निष्कर्शमा यो भन्न सकिन्छ कि मानिस सफल हुन कर्म गर्नु पर्छ तर छोटो आयुको खुसीेका लागि गरिने गलत कर्मले अन्ततः लामो दखःलाई निम्ता दिने गर्दो रहेछ । यो पनि सफल हुने बाटो होइन । त्यसै गरि असफल हुने डरले कर्म नै नगरि बस्नु पनि सफल हुने बाटो होइन ।
अर्को एउटा त्यत्तिकै महत्वपुर्ण कुरा छ त्यो भनेको कर्म गरेर मात्रै हुदैन । सही कर्म गर्न जरुरी छ । सही कर्म भन्नाले हामी जे गर्छौं त्यसमा हाम्रो ज्ञान हुनु जरुरी छ । ज्ञानका लागि अध्यायन हुन जरुरी छ । अध्यायन सिकाइका लागि हुनुपर्छ । अध्यायनका अनेक तरिका र रुप हुन सक्छन् । भनिन्छ उत्कृष्ट मानिसहरु अरुको गल्तिबाट सिक्छन््, साधारण मानिस आप्mनो गल्तिबाट र निकृष्ट मानिस अरुको आलोचना र प्रशंसा गरेर समय बर्बाद गर्छन् । सिकाईलाई निरन्तरता दिने र कर्मलाई जारी राख्नेहरुसँग सफल र असफलहुनुका अनुभव हुन्छन् । उनीहरु सफल हुँदा खुसी हुन्छन् र असफल हुदा सिक्छन् । तर निरास कहिल्यै हुदैनन् । वास्तवमा सफल मानिस तिनै हुन् ।
तपाई सफल वा असफल केहि पनि होइन भन्ने सम्झनुहोस् एकछिनलाई तपाईले देखे जानेका सफल वा असफल मानिसको सूची तयार पार्नुहोेस् । यो सूचि तयार पार्न धेरै कठिन छैन । धेरै टाडाका ठूलाठूला सफल र असफल व्यक्तिका कथाहरुको यसमा जरुरत पर्दैन । आफ्नै वरिपरिका जाने बुझेका, थाहापाएका, चिनेका, आफन्त मध्येबाटै यस्ता मानिसको सूचि बनाउदा राम्रो हुन्छ । सूचि धेरै लामो बनाउन जरुरी छैन । दुवै तिर पाँच पाँच जनाको बनाए पुग्छ ।
अब हरेक सफल मानिसका मिल्दाजुल्दा कुरा के के हुन् एक, दुई, तिन, चार गर्दै लेख्दै जानुहोस् । यसको शुरुवात उनीहरुकको दैनिकिदेखि नै शुरु गर्नुहोस् । कति समय काम गर्छन् ? के काम गर्छन् ? कसरी गर्छन् ? बोल्छन् के ? गर्छन के ? भनाई र गराईमा एकरुपता छ कि छैन ? लाउछन् कसरी ? खान्छन् कसरी ? अध्यानन कति गर्छन् ? बोलिमा कति पक्का छन् ? मनोरञ्जन केमा र कसरी गर्छन् ? छुट्टि कसरी मनाउछन् ? बचत कसरी गर्छन् ? धनको उपयोग कसरी र केमा गर्छन् ? मेहनत कति गर्छन् ? आदिआदि । त्यसै गरि असफल मानिसका पनि मिल्दाजुल्दा कुरा के के हुन त्यसैगरि लेख्दै जानुहोस् । सफल हुने र असफल हुने कारणहरु खोतल्नुहोस् । सफल हुँदै गएकाहरुका के के कुरा मिल्छन् र असफल हुदै गएकाहरुका के के कुरा मिल्छन् ? एक अर्कामा मिलाउनुहोस् । कतै यस्तो त हुँदैन सफल हुनेहरुका सोच, बानी, व्यवहार, शैली आदि मिल्दाजुल्दा छन् । त्यसैगरि असफल हुनेहरुका पनि सोच, बानी, व्यवहार, शैली आदि मिल्दाजुल्दा छन् । अब आपैmसँग दाजेर हेर्नुहोस् तपाईको आचरण, व्यवहार, बोली, शैली कोसँग बढी मिलेको छ ? यसबाट आप्mनो बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ । धेरै मानिसलाई लाग्छ म आप्mना बारेमा धेरै जान्ने छु तर वास्तविकता त्यस्तो हुदैन । भनिन्छ आप्mनो बारेमा थाहा पाउनु मानिसको ठुलो क्षमता हो । आप्mनो बारेमा थाहा पाउनु भनेको आपूmले सधैं हिँडने गरेको बाटो थाहा पाउनु हो । तपाई सफल वा असफल जे भएपनि त्यो तपाई आपैmले हिँडेको बाटो हो । त्यसलाई सही बाटोमा हिँडाउने क्षमता तपाईमा छ । अरु त सहयोगी मात्रै हुन् ।
सफल हुनु भनेको हामी कतिपयले बुभ्mने गरेजस्तो धनी हुनु धेरै धनसम्पति थुपार्दै जानु र कुनै सम्मानका पद प्राप्त गर्नुलाई मात्रै सफल मान्ने मानसमिकताबाट हलिक पर हटेर तपाईंले भोगेको जीवनमा कति सफल हुनुभयो भन्ने अर्थ तपाई कति खुसी हुनुहुन्छ भन्ने अर्थसँग जोडेर हेर्ने गरौं । यति तपाई सधैं खुसी हुनुहुन्छ भने तपाई पुर्ण सफल । यदि धेरै खुसी हुनुहुन्छ र कुनैकुनै समय दुखी हुनुहुन्छ तर त्यो दुखःमा पनि तपाईले सिक्नुभयो भने पनि तपाई सफल । तर धेरै दुखी हुनुहुन्छ, खुसी हुने कारणनै भेटनु भएको छैनभने तपाईसँग धेरै धन र ठुलो पद हुदैमा सफल कसरी मान्ने । किनकि सफल हुनुको अर्थ खुसी हुनु हो । यदि शान्ति, खुसी र स्वास्थसँग साटेर धन जम्मा गर्ने र पद प्राप्त गर्ने होभने सायद त्यो सफल मान्न सकिदैन ।
मैले केही मानिसहरु देखेको छु जो धेरैका नजरमा सफल छन् । उनीहरुले थोरै समयमा धेरै धन जोरजाम गरेका छन्, सामाजिक पद प्रतिष्ठा पनि छ तर वास्तवमा जीवनमा उनीहरु असफल छन् किनकि उनीहरुले खुसी गुमाएका छन् । उनीहरु अशुुरक्षा, तनाव, भयबाट घेरिएका छन् । यसको कारण उनीहरुको कर्म मुल्यमा आधारित थिएन । त्यस्ता मानिसको जीवनको पछिल्लो समयको सम्पुर्ण उर्जा शान्तिको खोजीमा हुन्छ, भए र तनावबाट मुक्तिहुने उपायको खोजीमा हुन्छ, स्वास्थ जीवनको खोजीमा हुन्छ । तर, यी तिनै चिज यति टाडा पुगिसकेका हुन्छन कि उनीहरु त्यसबाट कोसौ टाडा हुन्छन् । वास्तवमा उनीअरु सफल कि असफल ? कतै यस्तो त भएन खोजेको एक थोक, हातलागि भयो अर्कैथोक । खोजेको खुसी तर हातलाग्यो तनाव । यसको कारण तिनको सोचमा खोट थियो । उनले भोग र आशक्तिमा मन लगाए । भोगमा रमाए । भोगले क्षणिक खुसी दिए पनि दिर्घकालमा तृष्णा नै बढाउदै लान्छ । भोगको तृष्णा पुरा गर्दैजादा कर्मले गलत बाटो समायो । कर्म गलत हुदा दिगो खुसी टाडिदै गयो । जीवनका भोगाईहरुको भेलमा खुसीले साथ छाडेको पत्तै पाएनन् ।